पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो !
एजेन्सी–कोरियाली अदालतको आदेशपछि दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति पार्क गुएन हायलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ६५ वर्षीया पार्कलाई पक्राउपछि प्रहरीले राजधानी सिओलको दक्षिणी भागमा रहेको एउटा कारागारमा राखेको छ ।
कोरियाली समाचार संस्थाहरुका अनुसार पदमा रहँदा उनले विभिन्न कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा रकम भ्रष्टाचार गरी आफ्ना सहयोगी चाई सून सीललाई सहयोग गरेको अभियोगको छानविन गर्न अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई पक्राउ नगर्दा प्रमाणहरु नष्ट हुने सम्भावना रहेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउपछि उनलाई नजरबन्दमा राख्ने तयारी भइरहेको समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । यसअघि उनलाई महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिबाट बर्खास्त गरिएको थियो । दक्षिण कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति रहे पनि अपराधमा तानिएर हिरासतमा पर्नेमा उनी तेस्रो पूर्वराष्ट्रपति बनेकी छन् ।
२०७३ चैत्र १८ गते ११:५६ मा प्रकाशित
मेसीको प्रतिबन्धप्रति फिफाको कडा आलोचना !
धादिङमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यू
इन्धन हाल्ने पेट्रोल पम्पको सट्टा अब चार्जिङ सेन्टर खुल्ने !
आजबाट गाडी खरिदमा आयो नयाँ प्रावधान ? थाहा पाइराख्नुहोस्
दुई कम्पनीले क्रमशः३०% र १०% प्रतिशत बोनस दिंदैछन्,बुक क्लोजको यो मिति याद गर्नुहोस् !